Notanterahina tao amin’ny les roches rouges, ny sabotsy teo ny fankalazana amin’ny fomba ofisialy ny taom-baovao sinoa amin’ny fomba ofisialy. 14 février 2018
“Année du chien” na taonan’ny alika indray no manomboka amin’ny 16 febroary izao, lazaina hoe taonan’ny fifankatiavana.
Vita izany ny taonan’ny akoholahy na ny “année du coq”. Ny Elci (Ecole de langues commerciales internationale), miara-miasa amin’ny Confucius Institute no nanomana ny lanonana nanasana olo-manan-kaja maro. Nanatrika izany koa ny minisitry ny fampananana asa, fampianarana teknika ary fanofanana arak’asa. Zava-dehibe ny fianarana teny sinoa, noho ny firahalahiana sy fiaraha-miasa efa misy eo amin’ny Malagasy sy Sinoa, ny fandraharahana, ny fivezivezen’ny entana. Betsaka ihany koa ny orinasa sinoa miasa eto ka ny fahaizana teny sinoa dia manamora ny fahazoana asa.
Efa manomboka mahazo vahana ny fianarana teny sinoa na eto Mahajanga na manerana an’i Madagasikara. Teny faharoa maneran-tany ny teny sinoa. Mitondra anaram-biby 12 ny taona sinoa ka miova isan-taona izany. Nisy ny fanamarihana manokana ka naseho tamin’izany ny kolontsaina sinoa, na amin’ny dihy na fitafy na koa fisotroana dite na ceremonie du thé. Tsy hadino ny fomba fangataham-bady izay nahaliana ny maro tokoa.